Asus ရဲ့ Fingerprint ပါသော Budget Laptop - PX
များသောအားဖြင့် Laptop တွေမှာ Fingerprint ပါတယ်ဆိုတာ ဈေးကြီးတဲ့ Laptop တွေမှာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာမီ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်တော့မဲ့ Asus ရဲ့ Fingerprint ပါသော Laptop ကတော့ X407 နဲ့ X507 တွေဖြစ်ပါတယ်။ Display Size မှာဆိုရင် X507 က 15.6 inches ဖြစ်ပြီး X407 ကတော့ 14 Inches ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ထဲရောက်နေတဲ့ X507 လေးက အခြား Laptop တွေနဲ့ယှဉ်ရင် Size အတူတူပဲဆိုပေမဲ့ Display ပိုင်း Bezel လေးတွေပိုပါးသွားတဲ့အတွက် Display ကြီးကြီးနဲ့ Size သေးသေး Laptop တစ်ခုလိုခံစားနေရမှာပါ။
Display ကြီးပေမဲ့ Resolution ကလည်းမနည်းပါဘူး။ Full HD Resolution ဆိုတော့ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်။ အဲ့အပြင် Eye Care Mode, Vivid Mode, Manual Mode တွေပါတဲ့အတွက် ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင် ချိန်လို့ရတယ်။
Build Quality ပိုင်းမှာဆိုရင် Plastic ကိုမှာ ကြမ်းရှရှ Texture လေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတယ်။ အနည်းငယ်ချောင်နေတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့ အခြား အနေအထားတူ Laptop တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကျစ်လစ်နေပါတယ်။ အရောင်အနေနဲ့ ရွှေရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင်ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
Performance ပိုင်းမှာဆိုရင် Core i3 8th Gen တပ်ဆင်ထားပြီး Clock Speed အနေနဲ့ 2.2GHz ရရှိမှာပါ။ RAM အနေနဲ့ 4GB၊ Graphic ပိုင်းမှာဆိုရင် Nvidia MX110 နဲ့တပ်ဆင်ထားပြီး Storage အနေနဲ့ 1TB HDD ပါဝင်ပါတယ်။ Storage ပိုင်းကိုလဲ SSD နဲ့ အစားထိုး ထပ်မြှင့်လို့ရပါတယ်။ Port အနေနဲ့ USB ၃ ခု၊ HDMI ၁ ခုနဲ့ 3.5mm Jack တို့ပါဝင်ပါတယ်။ X407 မှာဆိုရင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှာတွေရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘယ်လိုလူတွေနဲ့သင့်တော်လဲဆိုရင် Office သမားတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးချင်ရင် ၆၀၀၀၀ လောက်စိုက်ပြီး 128 SSD ကိုစိုက်ထားပြီးသုံးရင် အတော်အဆင်ပြေမှာပါ။ SSD ပိုင်းမှာ Windows တင်၊ Software တွေထည့်ပြီး သုံးရင် ပိုမြန်တဲ့ Feeling ကိုရမှာပါ။ Student တွေ Graphic သမားတွေအတွက်တော့ Software အနိမ့်နဲ့ SSD စိုက်သုံးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ၅ သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့ အခြား Budget တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုတန်သော နှုန်းထားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Observe Here. Trust Yourself.
မႀကာခင္ထြက္ရွိလာေတာ့မဲ့ OPPO A7